ကျယ်ဂေါင်နယ်စပ်ဂိတ်၌ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံနေသည့် ကန်တော့ဗန်းရွက် မြန်မာအမျိုးသမီးနှစ်ဥ?? - Yangon Media Group
မူဆယ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁
မြန်မာ- တရုတ်နယ်စပ်တရုတ်နိုင်ငံဘက် ကျယ်ဂေါင်ဂိတ် အနီးလမ်းမကြီး ထိပ်ကွင်း၌ မြန်မာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးက မြန်မာဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်၍ ကန်တော့ဗန်းရွက် ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံရာ တရုတ်ပြည်တွင်းခရီးသွားများမှ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက် ကြသဖြင့် ဝင်ငွေအဆင်ပြေနေကြ ကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမူဆယ်မြို့မှ တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ သွားလာသူများ ပြားသည့် နန်းတော်ဂိတ်မှ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပါက တရုတ်နိုင်ငံ ကျယ်ဂေါင်မြို့သို့ ရောက်ရှိပြီး ကျယ်ဂေါင်မြို့ဝင်ဂိတ်ပေါက်အလွန် လမ်းမကြီးထိပ်နေရာမှာ နှစ် နိုင်ငံဖြတ်သန်းသူများ အများစု အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရာ နေ ရာဖြစ်သဖြင့် စည်ကားသည့်နေ ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
”တရုတ်ရုပ်ရှင်ထဲက ဝူခုန်း ပုံစံဝတ်ဆင်ထားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦး ဒီနေရာလာပြီး ဓာတ် ပုံအရိုက်ခံတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဘက်လာတဲ့ မြန်မာတွေ ဝူခုန်း ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့ တရုတ်နဲ့တွဲပြီး အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက် ကြတယ်။ အခုအဲဒီနေရာမှာ မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံတဲ့ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရှိလာတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံသားပြည်တွင်းခရီး သွားတိုင်းလိုလိုက ကန်တော့ဗန်းရွက်ထားတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးနဲ့ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ကြတာမို့ ဒီရက်ပိုင်းလက်မလည်အောင် တွဲအရိုက်ခံရတာတွေ့နေရတယ်” ဟု မူဆယ် မြို့မှ တရုတ်နိုင်ငံဧည့်လမ်းညွှန် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသူနှစ်ဦးမှာ အသက် (၃ဝ)ကျော်အရွယ်များဖြစ်ပြီး မျက်နှာသနပ်ခါးဘေးကျားလိမ်း၍ မြန်မာဝတ်စုံဝတ်ဆင်ပြီး ပဝါစခြုံကာ ခေါင်းပေါ်မှာ ငှက်ပျောသီးထည့်ထားသည့် လင်ဗန်းရွက်ထားရာ ဘုရားသွားကျောင်းတက် ပုံစံမျိုးဝတ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းတို့နှင့် ဓာတ်ပုံတစ်ခါတွဲရိုက်ပါက ရိုက်ခယွမ် ၁ဝ ရယူကာ တွဲရိုက်ခွင့်ပြု ကြောင်းသိရသည်။
ဖူးခက်၌ သင်္ဘော မတော်တဆ နစ်မြုပ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း ထိုင်းသို့ ခရီးသွားများ ပိုမို ဝင်ရော?
မန်ယူအသင်းသို့ မရောက်မီကပင် အယ်အေ ဂလက်ဆီသို့ မိုဗစ် ပြောင်းရွှေ့လိုခဲ့